Ny Semalt Islamabad Expert dia manome toro-hevitra hialana amin'ny informatika Spam
Ny Google Analytics dia iray amin'ireo rafitra fanaraha-maso azo antoka sy matanjaka indrindra hatramin'izao. Manampy anao hanara-maso ny kalitao amin'ny fifamoivoizanao izany ary mampitombo ny fahafahanao mahazo tombony amin'ny Internet. Indrisy anefa, ny tetika mampidi-doza izay mampiasa hackers sy spammers dia referrer spam. Miezaka mamitaka amin'ny kaontinao Google Analytics izy ireo, ary mitombo ny taham-pidinan'ny tranonkalanao.
Raha fantatrao ny etimôlôjian 'ity teny ity mba ampio ilay izy azafady araka ny toromarika misy eto. Open book 01.svg Anarana iombonana sokajy:
Referrer spam dia karazana votoaty hafahafa izay miseho ao amin'ny kaontinao Google Analytics, ary ny webmasters ihany no afaka mahita izany. Ny spam referrer dia tena fitohanana fifamoivoizana ary mampihetsi-po ny kalitaon'ny fitsidihanao. Mamangy ny tranokalanao izany fa ny taham-pitenenana sy ny fotoana laniana amin'ny pejy dia tsy ampoizina. Ny mpitsidika dia rohy iray izay mizara amin'ny lohan'ny HTTP ireo spamers rehefa mivezivezy amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa ny navigateur web. Ny kaonty Google Analytics dia hanaraka ity vaovao ity ary hampiseho azy ho fitsidihana mivantana, izay tena tsara ho an'ny tsy misy.
Torohevitra hiatrehana spam referrer:
Misy fomba sasany hiatrehana spam referrer ao amin'ny kaonty Google Analytics anao.
Toro # 1: Referrer Spam amin'ny Piwik:
Tao Piwik, ny manam-pahaizana dia nanomboka niasa tamin'ny fanalefahana ny spam referrera volana lasa izay. Raha mampiasa Piwik ianao, dia zava-dehibe ny mitazona ity fanavaozam-baovao ity, ary tsy tokony handefa tranokalan'ny vohikala tsy misy vidiny ianao. Amin'ny alalan'ity serivisy ity, dia mora ho anao ny hanaisotra spam referrals amin'ny tatitra avy amin'ny Google Analytics ary azonao atao ny mitazona ny daty fampandrenesana mandritra ny famantaranandro. Raha mahita tranonkala mampiahiahy ianao ao amin'ny statistika Google Analytics, dia ampidiro ao amin'ny lisitra Piwik faran'izay haingana. Raha miseho isan'andro ireo mpitsikilo vaovao dia azonao ampidirina amin'ny lisitra maintin'ny Piwik izy ireo ary afaka manatsara ny kalitao amin'ny fifamoivoizan'ny tranonkala.
Toro # 2: Spam referrer ao amin'ny kaontinao Google Analytics:
Ny Google Analytics dia tsy manome fiarovana amin'ny spam, fa afaka mamorona sivana ianao amin'ny fisorohana ny safidinao sy ny fiarovana anao. Raha te hamorona ny sivana ao amin'ny Google Analytics ianao dia alefaso any amin'ny tabilao Admin ary tsindrio ny safidy All Filters. Eto ianao, dia tokony hamorona filaharam-behivavy vaovao izay manafoana ny spam referrer mifototra amin'ny fanovana anao. Ao amin'ny fizarin'ny sivana, afaka miditra ireo sehatra spam rehetra ianao ary ahafahan'izy ireo fongana ao anatin'ny segondra. Ny ampahany tsara indrindra amin'ity sehatra ity dia ny tsy ahafahanao manilika rohy referener amin'ny referrer ary tsy mila mampiasa fitaovana manokana. Na dia mahazo fangatahana maro avy amin'ny mpitsikilo aza ianao, dia afaka mamorona filistaly maro ary manaisotra azy rehetra mba hanatsara ny antontan'isa momba ny analytics.
Ny hevitra farany:
Raha te hisoroka spammers amin'ny fotoana iray ianao, ireo toro-hevitra roa ireo dia hiasa tsara ho anao. Voalohany indrindra, tokony hampivelatra ny fahatakarana momba ny spam ianao sy ny fiantraikany amin'ny kaonty Google Analytics anao. Azonao atao koa ny miaro ny tranokalanao amin'ny fanovana ny fanalahidin'ny hack.htaccess anao, saingy zavatra iray azo atao izany Source .